Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Seychelles waxay u furmaysaa Koonfur Afrika
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Seychelles waxay mar kale u furtaa dadka socotada ah ee Koonfur Afrika
Booqdayaasha ka socda Koonfur Afrika waxay mar kale awoodi doonaan inay raacaan duulimaadyada jasiiradaha jannada ee Seychelles laga bilaabo Isniinta, Sebtember 13, Wasaaradda Caafimaadka ee jasiiradaha Badweynta Hindiya ayaa ku dhawaaqday Sebtember 11.
Rakaabka ka yimaada Koonfur Afrika, oo la tallaalo iyo haddii kaleba, ayaa loo oggolaan doonaa inay galaan jasiiradaha iyaga oo aan u baahnayn karantiil marka ay yimaadaan.
Shuruudaha gelitaanka iyo joogitaanka ma saameyn doonto xaaladda tallaalka COVID-19.
booqdayaasha waxaa si aad ah loogu dhiirigelinayaa in si buuxda loo tallaalo safarka ka hor waxayna u baahan doonaan inay keenaan caddeyn tijaabo COVID-19 PCR oo taban oo lagu sameeyay 72 saacadood gudahood bixitaanka.
Xaaladdii ugu dambaysay ee Galitaanka Caafimaadka iyo Joogitaanka Xaaladaha Socdaalka (V3.5), Koonfur Afrika ayaa laga saaray liiska Seychelles ee “Dalalka Xaddidan,” taasoo la micno ah in rakaabkii ka yimid Koonfur Afrika, la tallaalay iyo haddii kaleba, loo oggolaan doono inay galaan jasiiradaha baahida karantiil marka la yimaado.
Sida laga soo xigtay la-talinta, xaaladaha gelitaanka iyo joogitaanka ma saameyn doonto xaaladda tallaalka COVID-19, laakiin booqdayaasha waxaa si weyn loogu dhiirri-gelinayaa in si buuxda loo tallaalo safarka ka hor. Rakaabku waxay u baahan doonaan inay keenaan caddaynta tijaabinta COVID-19 PCR ee taban oo la sameeyay 72 saacadood gudahood markii la dhoofay iyo dhammaystirto Oggolaanshaha Socdaalka Caafimaadka. Waxay u baahan doonaan inay keenaan caddaynta caymiska Safarka & Caafimaadka si ay u daboolaan karantiilnimada, go'doominta ama daaweynta ee la xidhiidha COVID-19.
Booqdayaasha ka socda Koonfur Afrika ee buuxiya shuruudaha kor ku xusan ayaa laga yaabaa, inta ay joogaan gudaha Seychelles, joogi goob kasta oo dalxiis oo la xaqiijiyay oo aan lahayn ugu yaraan muddada joogitaanka aasaaskii kowaad. Uma baahna inay si joogto ah u kormeeraan Maalinta 5aad ee PCR Test2. Shuruudaha joogitaanka carruurta ilaa da'da 17, iyada oo aan loo eegin heerka tallaalkooda, waxay noqon doontaa waalidka/mas'uulka ay la socdaan. Soo -booqdayaasha ku sugnaa Bangladesh, Brazil, India, Nepal iyo/ama Pakistan, waddamada ku jira Liiska Xaddidan, 14 -kii maalmood ee ka horreeyay, si kastaba ha ahaatee, looma oggolaan doono inay galaan Seychelles.
Masuuliyiinta dalxiiska ee jasiiradaha Badweynta Hindiya ayaa soo dhoweeyay warka, iyadoo Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska Sylvestre Radegonde uu sheegay inuu ku faraxsan yahay dib-u-furista suuqa iyo “fursadaha uu suuqan muhiimka ahi bixiyo, oo ay ugu horreeyaan meelaha duulimaadka kalluumaysiga, iyo intaas wixii dhaafsiisan suuqa Koonfurta Ameerika. Iyada oo in ka badan 71% dadkeenna si buuxda loo tallaaley isla markaana tallaalka dhallinyarada qaangaarka ah 12 -18 sano si fiican u socdo, Seychelles waxay sameyneysaa waxa lagama maarmaanka u ah inay nabadgeliso dadkeeda iyo dadka soo booqda labadaba. ”
Seychelles waa meel ay raadinayeen dadka Koonfur Afrika, iyada oo la diiwaangeliyay in ka badan 14,355 sanadkii 2017. Faafida iyo xannibaadaha soo socda ayaa carqaladeeyay safarka iyo soo saarista 12,000 booqde ka hor masiibada sanadka 2019, imaanshaha ayaa hoos ugu dhacay in ka yar 2,000 sanadkii hore iyo 218 ilaa 5tii Sebtember ee sanadkan.
In kasta oo ay caadeysteen xeebaha iyo barkadaha dabaasha, socdaalayaasha Koonfur Afrika waa kuwo aad u xiiso badan, waxayna jecel yihiin in ay ku dhiiradaan raadadka dabeecadda, lugaynta, qiiq -quusashada, quusidda, doonnida, waxay rabaan inay la kulmaan dadweynaha maxalliga ah oo ay ka qaybgalaan dhaqdhaqaaqyada dhaqanka inta lagu jiro fasaxa.
Ka qaadista xannibaadaha ayaa sidoo kale ah war soo dhaweynaya tiro aad u badan oo ah milkiileyaasha guryaha Eden Island ee ku nool Koonfur Afrika kuwaas oo hadda awoodi doona inay ku laabtaan Seychelles iyaga iyo qoysaskooda.
David Germain, oo ah Agaasimaha Dalxiiska Seychelles ee Afrika & Ameerika oo fadhigiisu yahay Cape Town ayaa si farxad leh u salaamay ku dhawaaqista. “Kani waa war cajiib ah, imaanshaha socotada Koonfur Afrika ee ku soo laabanaya xeebaheena waa waqti dheer. Socotadu waxay rabaan inay ku nabad galaan jawi saafi ah markay fasaxa yihiin iyo meesha ka fiican Seychelles waqtigan aan la hubin. Hawlwadeennada dalxiiska iyo shaqaalahooda ayaa dhammaantood loo tababaray inay yareeyaan oo yareeyaan halista ka imaan karta COVID-19, sameynta borotokoollada hawlgalka ee caadiga ah iyagoo kaashanaya mas'uuliyiinta caafimaadka, kasbashada shahaadada COVID-safe. Koonfur Afrika lafteeda, tallaal ballaaran oo dadweynaha Koonfur Afrika ah ayaa durba ka bilaabmay oo ka socda waddanka oo dhan, tanina waxay kalsooni gelineysaa safarka, ”ayuu yidhi.
Xafiiska Dalxiiska Seychelles ee Koonfur Afrika wuxuu diyaar u yahay dhaqdhaqaaqyada suuq -geynta oo loo qorsheeyay inay ka dhacaan Koonfur Afrika iyo dalalka kale ee Afrika bilaha soo socda. "Tan waxaa ku jiri doona dhaqdhaqaaqyo ganacsi iyo macaamil oo taxane ah, oo leh" Seychelles Africa Virtual Roadshow "oo ah hawsha ugu weyn, si loo bixiyo badeecado iyo adeegyo iyo sidoo kale cusboonaysiinta la -talinta socdaalka ee bulshada ganacsiga safarka Afrika si ay ugu safraan Seychelles," Mr . Germain ayaa sharraxday. Tababarro taxane ah oo ah “Tababbarka Goobta Dalxiiska ee Seychelles,” safarada saxaafadda iyo booqashooyinka isbarashada ganacsiga ee Seychelles ayaa la qorsheeyey bisha Nofembar, iyo sidoo kale ololeyaasha xayeysiinta macaamiisha, iyo dadaallada suuq-geynta wadajirka ah ee ganacsiga safarka Koonfur Afrika.
Faahfaahinta buuxda ee shuruudaha, dhammaan booqdayaashu waa inay la tashadaan la -talin.seychelles.travel iyo seychelles.govtas.com iyo safarka ka hor.
Wixii su'aalo dheeraad ah, fadlan la xiriir [emailka waa la ilaaliyay] or [emailka waa la ilaaliyay]